स्वास्थ्य बीमावापतको रकम सरकारले व्यहोर्छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा - Enepalese.com
स्वास्थ्य बीमावापतको रकम सरकारले व्यहोर्छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
इनेप्लिज २०७५ चैत २६ गते ११:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, चैत २६ गते । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको स्वास्थ्य बीमावापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । सामुदयिकस्तरबाट सञ्चालित नेपाल आँखा अस्पतालको ४५आँै वार्षिकोत्सवमा उहाँले सबै जनतालाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।
बोर्डले एक वर्षभित्र सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गर्दैछ । मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमाको पहुँचका साथमा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको जनशक्ति, उपकरण र सेवा थप गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “नेपाल आँखा अस्पतालले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण छ, आगामी दिनमा यसलाई आँखा उपचार तथा जनशक्ति तयारी क्षेत्रमा उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन सरकारले सहयोग गर्नेछ”, मन्त्री खडिवडाले भन्नुभयो ।
अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डा कलमबहादुर खड्काले अस्पतालले आफ्नो सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिई पठनपाठनमा पनि महत्व दिएको बताउनुभयो । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले आँखा उपचार सेवा, जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । विसं २०३० चैत २६ गते सो अस्पताल स्थापना भएको हो । अस्पतालले पछिल्लो समय आँखा एमडी तहको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । सामुदायिक अस्पतालमध्ये सो अस्पताल उत्कृष्ट छ ।